ညဉ့်နက်မှ အိပ်တဲ့သူတွေဟာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်တဲ့
6 Nov 2018 . 4:36 PM
Circadian Rhythm ဆိုတာ (၂၄) နာရီအတွင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး အလုပ်လုပ်ချိန်နဲ့ အိပ်ချိန်ကို ခွဲခြားပေးထားတဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။ လူတိုင်းမှာရှိကြတဲ့ Circadian Rhythm တွေက မတူကြပါဘူး။ တချို့တွေက စောစောအိပ်တယ်၊ စောစောထတယ်။ တချို့က ညဉ့်နက်မှ အိပ်ပြီး နေမြင့်မှ ထကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ (၂၄) နာရီ လည်ပတ်ကြတဲ့သဘောပဲ။
ဒါပေမယ့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ University of Bristol ရဲ့ သုတေသနပညာရှင်တွေက စောစောအိပ် စောစောထတဲ့လူတွေက ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ (၄ဝ) ရာခိုင်နှုန်းက (၄၈) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုနည်းပါးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိပ်ချိန် (၈) နာရီထက် ပိုအိပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ (၂ဝ) ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့ သုံးသပ်သွားပါတယ်။
UK Biobank ပရောဂျက်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (၁၈ဝ,၂၁၅) ဦးနဲ့ Breast Cancer Association Consortium (BCAC) ရဲ့ စစ်တမ်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး (၂၂၈,၉၅၁) ဦးတို့ရဲ့ အဖြေတွေကို အခြေခံပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ မနက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ညနေပိုင်းမှာ လှုပ်ရှားမှု၊ အိပ်ချိန်နဲ့ ညအိပ်မပျော်အခြေအနေတွေဟာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တန်စွမ်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကဲ . . . ညဉ့်နက်မှာ အိပ်တတ်တဲ့ ဇီးကွက်လေးတွေကို လက်တို့ပြီး သတိပေးလိုက်နော်။
ညဉျ့နကျမှ အိပျတဲ့သူတှဟော ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျခွပေိုမြားတယျတဲ့
Circadian Rhythm ဆိုတာ (၂၄) နာရီအတှငျးမှာ ခန်ဓာကိုယျကို ထိနျးခြုပျထားပွီး အလုပျလုပျခြိနျနဲ့ အိပျခြိနျကို ခှဲခွားပေးထားတဲ့ ဇီဝဖွဈစဉျတဈခုလို့ ပွောရမှာပါ။ လူတိုငျးမှာရှိကွတဲ့ Circadian Rhythm တှကေ မတူကွပါဘူး။ တခြို့တှကေ စောစောအိပျတယျ၊ စောစောထတယျ။ တခြို့က ညဉျ့နကျမှ အိပျပွီး နမွေငျ့မှ ထကွတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ (၂၄) နာရီ လညျပတျကွတဲ့သဘောပဲ။
ဒါပမေယျ့ ဗွိတိနျနိုငျငံမှာရှိတဲ့ University of Bristol ရဲ့ သုတသေနပညာရှငျတှကေ စောစောအိပျ စောစောထတဲ့လူတှကေ ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျခွေ (၄ဝ) ရာခိုငျနှုနျးက (၄၈) ရာခိုငျနှုနျးအထိ ပိုနညျးပါးတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အိပျခြိနျ (၈) နာရီထကျ ပိုအိပျတဲ့ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ ရငျသားကငျဆာဖွဈနိုငျခွေ (၂ဝ) ရာခိုငျနှုနျးပိုမြားတယျလို့ သုံးသပျသှားပါတယျ။
UK Biobank ပရောဂကျြမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး (၁၈ဝ,၂၁၅) ဦးနဲ့ Breast Cancer Association Consortium (BCAC) ရဲ့ စဈတမျးမှာ ပါဝငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး (၂၂၈,၉၅၁) ဦးတို့ရဲ့ အဖွတှေကေို အခွခေံပွီး ထုတျပွနျလိုကျတာပါ။ မနကျပိုငျး သို့မဟုတျ ညနပေိုငျးမှာ လှုပျရှားမှု၊ အိပျခြိနျနဲ့ ညအိပျမပြျောအခွအေနတှေဟော ရငျသားကငျဆာဖွဈတနျစှမျးနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ကဲ . . . ညဉျ့နကျမှာ အိပျတတျတဲ့ ဇီးကှကျလေးတှကေို လကျတို့ပွီး သတိပေးလိုကျနျော။